Fahataperan'ny hamehana :: Mitohy ny fanasaziana ireo tsy manao arovava sy orona • AoRaha
Fahataperan’ny hamehana Mitohy ny fanasaziana ireo tsy manao arovava sy orona
Tapitra hatreo ny hamehana ara-pahasalamana, araka ny tatitry ny Filankevitry ny minisitra, tamin’ny zoma 3 septambra lasa teo. Tsy midika ho fahafahana tsy hanaraka ireo fepetra sakana ara-pahasalamana napetraka intsony anefa izany, araka ny fanazavan’ny avy ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamambahoaka sy ny Prefektioran’ ny tanànan’Antananarivo. Mitohy ny ady amin’ny valanaretina Covid-19 ka hosaziana ireo tsy manao arovava sy orona eny andalana, izay efa ajanon’ny ankamaroan’ny olona ny manao azy, amin’izao fotoana izao.
“Mbola eny amintsika eny ihany ny aretina fa tsy mbola resy tanteraka matoa mbola misy tranga vaovao isan’andro. Hiteny ny Polisimpirenena sy ny Zandary aho hanara-maso ireo olona tsy manao arovava sy orona eny an-dalana satria tsy mety raha avela fotsiny amin’izao. Ny fanajana ny elanelana no mety tsy ho voatana intsony”, hoy ny jeneraly Ravelonarivo Angelo, préfet-n’Antananarivo renivohitra.
“Tsy maintsy tazonina ireo fepetra madinidinika, toy ny fanaovana arovava sy orona, fanasana tanana matetika indrindra rehefa misy ny fivorivorian’ny olona maro amin’ny toerana iray”, hoy Dr Rakotoarivony Manitra, talen’ny Fampiroboroboana ny fahasalamana ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. “Mila tohizana ihany koa ny fahazarana manatona toerampitsaboana hatramin’izay rehefa misy soritr’aretina. Efa misy, rahateo ny vaksiny, ka afaka misafidy ny tsirairay avy ho fisorohana ny tranga misy fahasarotana”, araka ny fanamafisan’itsy farany.
An-kilany, tao anatin’ny roa andro, tamin’ny fitiliana sivy ambin’ny folo sy valonjato, tsy misy afa-tsy telo no nahitana trangana Covid-19. Iray no maty tao anatin’ny telo andro ka nampiakatra ny isa ho fito amby dimampolo sy sivinjato nandritra ny fisian’ny Covid-19 teto Madagasikara. Olona efatra, avy eto amin’ny faritra Analamanga no manana fahasarotana ankehitriny.
Fahasalaman’ny maso :: Hotilina katarakta maimaimpoana ireo zokiolona